Ixabiso eliphantsi le-Twin Screw Extrusion Isichumisi somatshini weGranulator abaXhasi kunye neFektri | YiZheng
Yintoni umatshini weTwin Screw Extrusion Fertilizer Granulator?
Kabini Screw extrusion umatshini granulation Itekhnoloji entsha ye-granulation eyahlukileyo kwi-granulation yemveli, enokusetyenziswa ngokubanzi kukutya, isichumiso nakwamanye amashishini. I-Granulation yinkqubo ebalulekileyo ngokukodwa kwi-powder granulation eyomileyo. Ayichongi kuphela ubunzima besichumiso segranular, kodwa ikwahambelana nomgangatho kunye neendleko zemveliso yesichumiso.
Umsebenzi oSisiseko seTwin Screw Extrusion Isichumisi somatshini weGranulator
Lo msebenzi wokukhululwa kwe I-Twin Screw extrusion ye-Granulator yoMatshini yonyuswe ngokubonakalayo yimeko ekhethekileyo yoomatshini bokuhamba kunye nolwakhiwo ngaphakathi kwendawo yokukhutshwa. Okokuqala, ngokubuyela umva kwesikere esiphindwe kabini, izixhobo kwindawo ekukhutshelwa kuyo enesantya esiphezulu sokurabha esomeleleyo kunye nokucheba rhoqo ukwandisa ukubanakho kokudibanisa phakathi kweemolekyuli zezinto. Okwesibini, izinto zongqubana kakhulu kwaye zihlikihlwa kwindawo ye-extrusion, yenza uxinzelelo lwe-extrusion lukhule kwaye luhlale luzinzile kwimeko yoxinzelelo oluphezulu. Ubushushu bendawo ekugxothwa kuyo bunokunyuka bube ngaphezulu kwe-75 ℃ ngokukhawuleza. Kwelinye icala, uxinzelelo lwezixhobo kunye nobushushu zihlangabezana ngokupheleleyo neemeko zegranating. Kwelinye icala, impembelelo eyomeleleyo eyohlobo olunye itshintshe ubume beemolekyuli zezixhobo, ukuze kuphuculwe kakhulu umgangatho kunye namandla egranules ngudluliso lobushushu kunye noxinzelelo oluphezulu lokudlulisa ukufumana imveliso yezichumiso esemgangathweni ophezulu.
Izinto eziluncedo zeTwin Screw Extrusion Isichumisi somatshini weGranulator
(1) ukusebenza ezinokuthenjwa kunye nereyithi granulating eliphezulu, amandla elungileyo granule kunye mninzi isambuku aphezulu
(2) bhetyebhetye Wide izinto ekrwada.
(3) Akukho siphumo sonakalisayo kubume bezinto ezinobushushu obuphantsi bokusebenza.
(4) I-granulation igqityiwe ngoxinzelelo, akukho sidingo nakuphi na ukubopha, inokuthembisa ubunyulu bemveliso.
(5) I-granulator inesakhiwo esihambelanayo, kulula ukugcinwa kunye nokulungiswa
(6) Izinto eziphambili zokuqhuba zenziwe ngezinto zentsimbi ezikumgangatho ophezulu, intsimbi engenasici, titanium, i-chromium njl., Ezine-abrasion-proof, corrosion-proof, high-proof, kwaye zinobomi obude benkonzo.
I-Twin Screw Extrusion Isichumisi seGranulator yoMatshini weVidiyo
Iscrew Screw Extrusion Isichumisi soMatshini oMiselweyo
Ububanzi beHole Hole
Ubungakanani Ngokubanzi (L × W × H)
Egqithileyo I-Flat-die Extrusion granulator
Okulandelayo: Imveliso emanyeneyo ye-Organic Fertilizer isebenzisa iCrusher